Soo Iibso Ubaxyo Khariidad ah Shaashad Dharka Dumarka Faransiiska Oo Dumiya Feeraha & Saraawiisha Calan - Rar bilaash ah & Cashuur la'aan | WoopShop®
Ubaxyada Dahabka ah waxay shaati gashadaan Dharka Dumarka ee Faransiiska riix korka Bra & Saraaya
$ 25.99 qiimaha joogtada ah $ 38.99
Cabbirka Koobka XL 85A 85B 80C M 75A 75B 70C S 65C 70A 70B L 80A 80B 75C
Madow / XL 85A 85B 80C Madow / M 75A 75B 70C Caddaan / XL 85A 85B 80C Caddaan / M 75A 75B 70C Madow / S 65C 70A 70B Madow / L 80A 80B 75C Caddaan / S 65C 70A 70B Caddaan / L 80A 80B 75C Buluug / XL 85A 85B 80C Buluug / M 75A 75B 70C Buluug / S 65C 70A 70B Buluug / L 80A 80B 75C
Ubaxyada Wax-duubka ah ee shaashadda Dharka Dumarka Faransiiska ah oo Riixaya Bra & Pants Set - Black / XL 85A 85B 80C gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Qaabka Bra: Push Up, Plunge, Unlines
Nooca Taageerada: Wire Free
Waxyaabaha: Polyester, Nylon, Cotton
Shaxda Koobaad: Saddex Quarters (3 / 4 Cup)
Nooca Xiritaanka: Lix Hook-iyo-il
Nooca Xarigga: Xargaha la hagaajiyay, Xargaha aan la beddeli karin
Nooca Shayga: Qalabka Bra & Gaaban oo Kooban
Nambarka Tusaale: B14702
Midabka Midabka: Midabka Dabiiciga ah
Dharka guud: 100% fiber polyester,
Dahaarka Koobka: 97% viscose, 3% spandex,
Dahaarka Flank: 95% nylon, 5% spandex
S- 70AB / 65Cor Panties S
M-75AB / 70Cor Panties M
L- 80AB / 75Cor Panties L
XL-85AB / 80Cor Panties XL
Wax walba way fiican yihiin, tayada joogga) cabirku si fiican ayuu ugu dhawaaday
Cute, heerarka tayada leh, dukaanka lacagtaas oo kale waxay ku kici laheyd 1500. Laakiin waxaan hayaa xoogaa jiidis ah dusha sare, nasiib daro. Waxaa laga yaabaa sababta oo ah xaqiiqda ah in xabadka uu yar yahay. Pantiyadu waa caadi, tayadu sidoo kale way wanaagsan tahay.
Xirmada cajiibka ah !!! Jilicsan, raaxo leh, waan ku faraxsanahay)))
Waxay umuuqataa qabow. Corset super. Dahaadhka koobabka waa lagaa saari karaa. Koobabku waa wax yar oo la yaab leh laakiin way tagi doontaa. Lafo kuma taal rajabeetarka, kaliya korka. Saraawiisha aad ayey u weyn yihiin, in kastoo cabirkoodu yahay s. Gaarsiinta waxay ku jirtaa fikradda 10 maalmood, laakiin amarka ayaa dib u dhacay toddobaad. Natiijo ahaan, 3 toddobaad kadib bixinta ayaa timid.
Qalab aan macquul ahayn. Xaqiiqdii waa u qalantaa lacagtaada. Tayada waa mid aad u wanaagsan, waxaa loo sameeyay si hagaagsan. Cabbirku wuxuu ku dhawaaday si fiican. Geyn aad u dhakhso badan Mahadsanid!